अल्जाइमरको औषधि (ईड ड्र्याक्ट) उम्मेद्वार: जेएक्सएनएमएक्सएक्स, सीएमएसएक्सएनमक्स, क्याडक्समिक्स
/ब्लग/J147/अल्जाइमरको औषधि (ईड ड्र्याक्ट) उम्मेद्वार: जेएक्सएनएमएक्सएक्स, सीएमएसएक्सएनमक्स, क्याडक्समिक्स
प्रकाशित 07 / 10 / 2018 by 阿斯劳 मा लेखियो J147.
अल्जाइमर र जेरोपोटोटेक्टरहरू (GNPs) के हो?
अल्जाइमर भनेको औषधिको सबैभन्दा सामान्य कारण हो, एक प्रकारको पदार्थ हो जुन मेमोरी, सोच र व्यवहारको समस्या हो। लक्षण सामान्यतया बिस्तारै विकास र समयको साथमा खराब हुन, दैनिक कार्यहरु संग हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त गम्भीर हुन्छ।अल्जाइमर रोग 60 प्रतिशतको लागि 80 प्रतिशतमा मौनताका घटनाहरु। र उमेर उमेर अल्जाइमर रोग (एडी) र क्यान्सर सहित धेरै रोगहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम कारक हो।
जेरापोट्रोटकहरू, यो एक सेरोथेरेपिक हो जसले उमेर र उमेर सम्बन्धी रोगहरूको मूल कारणलाई असर पार्छ, र यसैले जानवरहरूको जीवन लामो समयसम्म लामो पार्छ। नयाँ साल्क अनुसन्धानले अहिले यी यौगिकहरूको एक अनूठा उपव्यापी पहिचान गरेको छ, गेरियोनेरोप्रोटेक्टरहरू (जीएनपी) राखिएको छ, जुन ईश्वरको औषधि उम्मेदवारहरू हुन् र चूहमा उमेरको प्रक्रिया घटाउँदछ।
अल्जाइमरको रोगको कारण
शोधकर्ताहरूले विश्वास गर्छन् कि अल्जाइमर रोगको एक मात्र कारण होइन। तपाईं अल्जाइमर रोग कसरी भेट्नुहुन्छ? रोग सम्भवतः आनुवंशिकी, जीवनशैली र वातावरण जस्तै एकाधिक कारकहरूबाट विकास हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले कारकहरूलाई पहिचान गरेका छन् जसले अल्जाइमरको जोखिम बढाउँछन्। केही जोखिम कारकहरू - उमेर, पारिवारिक इतिहास र विरासत - परिवर्तन गर्न सकिँदैन, उभरिरहेको प्रमाणले सुझाव दिन्छ कि हामी प्रभावकारी हुन सक्ने अन्य कारणहरू हुन सक्छ।
अल्जाइमरको लागि सबैभन्दा ठूलो ज्ञात जोखिम कारक बढ्दो उमेरमा छ, तर अल्जाइमर उमेरको सामान्य भाग होइन। उमेरमा जोखिम बढ्दै गर्दा, यो अल्जाइमरको प्रत्यक्ष कारण होइन।
बीउ संग अधिक व्यक्तिहरु 65 र अधिक हो। 65 उमेर पछि, हरेक पाँच वर्षमा अल्जाइमरको डगलको जोखिम। 85 उमेर पछि, जोखिम लगभग एक तिहाई पुग्छ।
अर्को बलियो जोखिम कारक परिवारको इतिहास हो। जो अल्जाइमरको साथ आमाबाबु, भाइ वा बहिनी छ भने रोगलाई विकास गर्न सम्भव छ। जोखिम बढ्छ भने एक परिवार भन्दा बढी सदस्य बिरामी छ।
वैज्ञानिहरु थाहा हुन्छ जीनज अल्जाइमरको मा संलग्न हुन्छन्। जीनको दुई किसिमले यो रोगलाई असर गर्दछ कि कुनै व्यक्ति रोगलाई विकास गर्दछ: जोखिम जीन र निर्धारिती जीन।
- चोट चोट
त्यहाँ हेड चोट र डेमेनियाई को भविष्य को जोखिम को बीच एक लिंक छ। आफ्नो दिमाग बेल्ट बाक गरेर आफ्नो मस्तिष्क सुरक्षित गर्नुहोस्, खेलकूदमा भाग लिँदा तपाईंको हेलमेट लगाएर र "गिर-प्रमाण-प्रसार" तपाईंको घर।
केही सबभन्दा बलियो सबूतहरूले मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई हृदय स्वास्थ्यमा लिन्छ। यो जडानले अर्थ दिन्छ, किनभने मस्तिष्क रगतको बिरुवाहरूको शरीरको सबै भन्दा राम्रो सञ्जालहरू द्वारा पोषण गरिन्छ, र हृदयमा यी रक्त वाहिकाहरू मार्फत रक्त पिउन को लागी जिम्मेवार छ।
आज, अल्जाइमर बियोरोडिकल रिसर्चको शीर्षमा छ। शोधकर्ताहरु लाई अल्जाइमर रोग र सम्भवतः अन्य डेमेन्टिया को धेरै पहलुहरु लाई उजागर गर्न काम गर्दै छन्। केहि भन्दा उल्लेखनीय प्रगतिले अल्जाइमरले मस्तिष्कलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरालाई प्रकाश पारेको छ। आशा यो बेहतर समझ हो नयाँ उपचारको लागी। विश्वव्यापि अन्वेषणमा हाल धेरै सम्भावनात्मक दृष्टिकोणहरू छन्।
शरीरको बिरुवामा वजन घटाने औषधि 2,4-डाइनिट्रोफेनोल (DNP) फाइदाहरू
साल्कको सेलुलर न्यूरोबायोलोजी प्रयोगशालाले दुईवटा रसायनहरू फेला पारेको रोपणमा जो औषधीय गुणहरू देखाइरहेछ: फिस्सेन, फलफूल र सब्जिहरु, र कर्सिजनबाट व्युत्पन्न प्राकृतिक उत्पादन, करी स्पाइस टर्मेरिकबाट। यीबाट, टोलीले तीन संश्लेषण गर्यो AD drug उम्मेदवारीहरू बुढो मस्तिष्कसँग सम्बन्धित धेरै विषाक्तताहरूबाट न्यूरोन्सहरूको रक्षा गर्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ। प्रयोगशालाले देखाउँछ कि यी तीन कृत्रिम उम्मेद्वारहरू (CMS121, CAD31 र J147), साथसाथै फिस्सिइन र कर्सिइन, उमेरको आणविक मार्करहरू र साथसाथै डिमेन्टिया घटाउनुभयो, र चूहों वा मक्खनको मध्यको विस्तार बढायो।
महत्वपूर्ण रूपमा, समूहले देखाएको छ कि यी AD औषधि उम्मेदवारहरूद्वारा संलग्न आणविक मार्गहरू दुई अन्य राम्रो तरिकाले अनुसन्धान गरिएको सिंथेटिक यौगिकहरू जस्तै धेरै जानवरहरूको जीवन विस्तार गर्न जान्छन्। यस कारण, र आफ्नो अघिल्लो अध्ययनको नतिजामा आधारित, टोलीले फिस्सेन, कर्सिइन र तीन ईश्वरका औषधीय उम्मेद्वारहरुलाई सबैले ग्वेरोनरोप्रोटेक्टरहरूको परिभाषालाई पूरा गर्छन्।
प्रयोगशालामा अन्य अध्ययनहरू निर्धारण गर्दैछन् कि यी यौगिहरूसँग मस्तिष्क बाहिरका अंगहरूमा असर छ। "यदि यी औषधीहरूले अन्य निकाय प्रणालीहरूको लागि फाइदा उठाउँछन्, जस्तै गुर्देको कार्य र समग्र मांसपेशी स्वास्थ्यको रूपमा, उनीहरूको उमेर बढ्ने रोगहरूको उपचार गर्न वा रोक्न थप तरिकाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ" भनी Schubert भन्छन्।
- अल्जाइमरको औषधी (ईडी औषधि) उम्मेद्वार: जेएक्सएनएमएक्स
Curcumin, भारतीय करी स्पाइस टर्मेरिक को मुख्य घटक, एक बहुउद्देश्य यौगिक हो जुन सूजन, आरओएस उत्पादन, एमीलोड विषाक्तता र उत्तेजना को विषाक्तता कम गर्दछ, र एडी को रोडेन्ट मोडेल मा धेरै प्रभावी छ। यद्यपि, कर्सिजनसँग धेरै न्यूयोट्रोफिक गतिविधि, खराब जीवविहीनता र खराब दिमागमा प्रवेश गरेको छ। कर्नेलको न्यूरोट्रोफिक गतिविधि र चयापचय स्थिरता सुधार गर्न, हामीले एसएआर प्रयोग गरेको रसायन विज्ञानको गुणस्तरमा प्रयोग गर्नका लागी औषधिको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि प्रयोग गरिसकेको बेला बेलायतमा यसको क्षमता र यसको जैविक गतिविधिको पहल बढ्छ। प्रारम्भिक रूपमा कर्सिइनको अत्यधिक प्रयोगशाला डिएटिओ प्रणालीले CNC-001 बनाउन सुधारिएको र न्यूरोप्रोटोक्टिव गतिविधिको साथ curcumin मा एक pyrazole मा परिमार्जन गरिएको थियो। CNB-001 को तीन फिनाइल रिंग्स मा समूहको प्रणालीगत अन्वेषणले थाहा पाएको छ कि हाइड्रोक्साइल समूह सात स्क्रीनिंग अस्तित्वहरुमा गतिविधि को लागी आवश्यक छैन। पेइजोलले संलग्न फिनल रङमा दुई मेथिल समूहको अतिरिक्त सीएनबी-एक्सएनएमएक्सले सीएनबी-एक्सएनमक्समा सुधार क्षमताको साथ लिईयो। तथापि, सीएनबी- 023 अत्यधिक lipophilic (cLogP = 001) छ, र उच्च lipophilicity संग यौगिहरु बहु देनदारताहरू छन्। Lipophilicity को कम गर्न र गतिविधि को लागी न्यूनतम संरचनात्मक आवश्यकताहरु लाई पहिचान गर्न को लागि, दुई दालमिल समूह को एक हटाईयो र अधिक अनुकूलन को एक अत्यंत शक्तिशाली सानो अणु J147। J147 CNNUMX-5 पटक CNC- 10 को रूपमा स्क्रीनिंग एस्समा सबै अधिक शक्तिशाली छ, जबकि कर्सिइनले कुनै पनि सम्पत्तिमा कम वा कुनै गतिविधि छैन। J001 केवल उच्च शक्तिशाली छैन तर यसमा राम्रो भौतिकीसायनिक गुणहरू (मेगावाट = 147, cLogP = 350, टीपीएसए = 4.5)। J42 (1146963-51-0) को सामान्य उमेर र एडी मोडेल मा ठूलो मात्रा मा अध्ययन गरेको छ जहां यसको उत्कृष्ट चिकित्सीय प्रभावकारीता छ।
जेएक्सएनएमएमले कुनै पनि चिन्ताले अरोमेटिक एमिन्स / हाइड्राजाइनिनहरूलाई खतरनाक हुन सक्छ जुन सम्भावित कार्लिकिनिक हो। यो सम्भावना पत्ता लगाउन, J147 को चयापचय स्थिरता माइक्रोस्मोजमा, माउस प्लाज्मामा र भिभमा अध्ययन गरिएको थियो। यो देखाइएको थियो J147 (1146963-51-0) अरोमेटिक एमिन्स वा हाइड्राजाइनमा डग्लिएको छैन, कि मचान असाधारण स्थिर छ, र यो मानव, माउस, चूहा, बन्दर र कुत्ता यवर माइक्रोस्मोजमा दुई वा तीन ओक्साइडिटिभ मेटाबोलाइट्समा परिमार्जित गरिन्छ। यी चयापचयहरूको सुरक्षाको जाँच गर्न हामीले सबै तीन जिगर माइक्रोस्मेटल चयापचय संश्लेषित गरेका छौं र उनीहरूले न्यूरोप्रोटेसन परमाणुमा जैविक गतिविधिको लागि आश्वासन दिए। यी मध्ये कुनै पनि metabolites विषाक्त छन्, र metabolites को धेरै जैविक गतिविधिहरु छन् J147 को समान जस्तै।
- अल्जाइमरको औषधि (ईडी औषधी) उम्मेद्वार: CMS121
CMS121 को व्युत्पन्न हो fisetin। पछिल्लो केहि वर्षहरुमा, हामीले देखेको छ कि Flavonoid fisetin एक मौखिक सक्रिय, न्यूरोप्रोटोक्टिव, र सिग्नसन-वृद्धि अणु हो। सीएनएस विकारहरूको धेरै जनावर मोडेलहरूमा। Fisetin प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि छ र GSH को intracellular स्तर को तनाव को तहत रख सकते हो। यसको अतिरिक्त, फिस्सेट मा न्यूरोट्रोफिक र एसिडमेन्ट्री गतिविधि छ। कार्यहरूको यो विस्तृत दायराले बताउँछ कि फिस्सिटले धेरै विकारहरूसँग सम्बन्धित न्यूरोलॉजिकल प्रकार्यको हानि कम गर्न सक्ने क्षमता छ। तथापि, यसको अपेक्षाकृत उच्च ईक्सएक्सएनमक्स सेल आधारित एसिड (50-2 μM), कम lipophilicity (cLogP 5), उच्च टीपीएसए (1.24), र खराब जैवव्यावधि मा लागू औषधिको रूपमा थप विकासको लागि सीमित फिसेटिन छ।
चुनौती धेरै न्युरोप्रोटेक्टिव मार्गमा फिसेटिन को क्षमता को सुधार गर्न को लागि थियो जबकि एक नै समय मा उनको भौतिकीसायनिक गुणों को बदलन सफल सीएनएस ड्रग्स को उनसंग संगत हुन्छ (आणविक वजन ≤ 400, cLogP ≤ 5, टीपीएसए ≤ 90, एचबीडी ≤ 3, एचबीए ≤ 7) .फिस्टीन सुधार गर्न दुई फरक दृष्टिकोणहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। पहिलोमा, फरक हाइड्रोक्साइल समूहहरू सम्भवतः सल्फेट / ग्लुकोरोनिडेट मेटाबोलाइटहरू हटाउन व्यवस्थित तरिकामा परिमार्जन गरिएको थियो। दोस्रो दृष्टिकोणमा, फ्लेभोन मचानलाई एक क्विनोलिनमा परिवर्तन गरिएको थियो, जबकि त्यहि समयमा फिसिटिनको प्रमुख संरचनात्मक तत्वहरू राख्ने। हाम्रो बहुमूल्य औषधि खोज्ने दृष्टिकोणको उपयोग गर्ने, हामीले न्यूरोप्रोटेक्टिव ओक्सीटोसिसमा धेरै सुधारिएका गतिविधिहरूसँग धेरै डेरिभेटिभहरू सिर्जना गरेका छौं। vitro ischemia assays। डेरिभेटिभमा तीन अतिरिक्त क्रियाकलापहरू राखिएका थिए, जसमा जीएचडीको रखरखाव, जीवाणु लिपिओपिलेसिसेक्क्राइडाइड (एलपीएस) इन्जिनियरिङ माइक्रोग्लिल सक्रियता, र PC12 सेल भेदभाव, न्यूरोट्रोफिक गतिविधिको एक उपाय। फ्लेभोन व्युत्पन्न CMS-140 र क्विनोलोन व्युत्पन्न सीएमएस-एक्सएनएक्स 121 र 600 गुणा अधिक शक्तिशाली, क्रमशः, ईशियामा परेका फिस्टिइन भन्दा बढी (चित्रा। यस प्रकार, यो फिलीओकेमिकल र अन्य दुवै सुधार गर्दा polyphenol को बहुमित गुणहरू राख्न सम्भव छ। कम्पाउण्डको औषधीय गुणहरू।
- अल्जाइमरको औषधि (ईडी औषधी) उम्मेद्वार: CAD31
CAD31 को बहुविध भौतिक प्रभाव सबै उमेर-सम्बन्धित न्यूरोडोज्नेटिभ रोगहरूमा विषाक्त घटनाहरु को रोकथाम को संदर्भ मा अनुकूल थियो।
CAD31 एक अल्जाइमर रोग (AD) औषधि उम्मेदवार हो जुन मानव भ्रूण स्टेम सेल-व्युत्पन्न तंत्रिका पूर्ववर्ती कोशिकाहरु र साथ नै एप्सवे / पीएसएक्सएनएमएक्सएक्सएनएमक्सक्स एडी चूहों मा प्रतिकृति को उत्तेजित गर्न को लागी को क्षमता को आधार मा चुनेको थियो। क्लिनिकमा CAD-1 लाई सार्नको लागी, यसको न्यूरोप्रोटोटिकल र औषधीय गुणहरू निर्धारण गर्न प्रयोगका लागि प्रयोग गरियो, साथसाथै AD को एक कठोर माउस मोडेलमा यसको चिकित्सकीय प्रभावकारिता मान्न।
CAD31 छ छ कि छ कि एक फरक तंत्रिका सेल assays मा शक्तिशाली neuroprotective गुण पुरानो मस्तिष्क मा विषाक्तताहरु को नकल गर्दछ। औषधीय र प्रारम्भिक विषाक्तविकल्प अध्ययनले देखाउँछ कि CAD31 मस्तिष्क-प्रवेशिका र सम्भावित सुरक्षित हो। जब 1 महिना को उमेर मा शुरू भएको थियो, तब सम्म बीमारी को उपचार को एक चिकित्सीय मोडेल मा अतिरिक्त उमेर को लागी पुरानो, लक्षण, एपीएसएसपीएस / PS9ΔE10 AD चूहों को रूप मा खिलाए, स्मृति घाटा र दिमाग मा सूजन को कमी को रूप मा, साथै को अभिव्यक्ति मा वृद्धि synaptic प्रोटीन। मस्तिष्क र प्लाज्माका साना अणु मेटाबालिक डेटाले देखाएको छ कि सीएडी-3 को मुख्य प्रभाव फाइटी एसिड चयापचय र सूजनमा केन्द्रित छ। जीन अभिव्यक्ति डेटाको मार्ग विश्लेषणले देखाएको छ कि CAD-31 सँग सिंक गठनमा प्रमुख प्रभावहरू थियो र AD ऊर्जा चयापचय मार्गमा।
शोध समूह अब दुई जीएनपीहरू मानव चिकित्सीय परीक्षणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ। Fisetin व्युत्पन्न, CMS121, वर्तमान मा पशु चिकित्सा परीक्षण मा एफडीए अनुमोदन को लागी नै नैदानिक ​​परीक्षण सुरु गर्न आवश्यक छ। Curcumin व्युत्पन्न, J147, एफडीए समीक्षा अन्तर्गत अगली वर्षको शुरुमा ई। को लागि नैदानिक ​​परीक्षण सुरु गर्न को लागी हो। समूहले जैविक रसायनिक मार्करहरूलाई सम्भावित जियोप्रोटोटिव प्रभावका लागि परिकल्पना गर्न जैविक रसायनिक मार्करहरू समावेश गर्न योजना बनाउँछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले बताउँछन् कि यी औषधी उम्मेदवारहरूको खोजीले औषधि खोज मोडेलको प्रमाणलाई पुष्टि गर्दछ जसले उनीहरूलाई थप पहिचान गर्नका लागि उपयुक्त पद्धतिको रूपमा विकसित गरेको छ। GNP यौगिकहरू यसले स्वस्थ उमेरको बढावा गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले औषधिको पाइपलाइन तीव्र बनाउन सक्छ कि उमेरको रोगहरूको उपचार गर्न को लागी हालको कुनै उपचार छैन।
मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडरको लागि सबैभन्दा व्यापक परिचय	लेभोनर्जेन्डेल: यो कसरी काम गर्दछ, प्रयोग गर्दछ, साइड इफेक्ट